एमाले–माओवादीले बनाए पार्टी सञ्चालनका ९ सदस्यीय ‘हाइकमाण्ड’, को–को छन् हाइकमाण्डमा ? « Light Nepal
एमाले–माओवादीले बनाए पार्टी सञ्चालनका ९ सदस्यीय ‘हाइकमाण्ड’, को–को छन् हाइकमाण्डमा ?
Published On : 17 May, 2018 3:11 pm
काठमाडौं,३ जेठ । एकतापछि पार्टी सञ्चालनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेगरी नेकपा कम्युनिष्ट पार्टीमा ९ सदस्यीय हाइकमाण्ड बन्ने भएको छ । । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बन्ने पार्टीको सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले हाइकमाण्ड गठनको निर्णय गरेको हो । स्रोतकाअनुसार विष्णु पौडेल महासचिव बन्ने भएका छन् भने नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ता बनाउने तयारी छ ।
हाइकमाण्डमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहनेछन् । त्यसपछिको वरियतामा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेल हुनेछन् । संगठनको काम गर्ने जिम्मेवारीसहित पौडेललाई महासचिवको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।